श्रीमानका यस्ता सानातिना गल्तीहरूले, बिग्रन सक्छन् श्रीमतीहरू ! (एकपटक अवस्य पढ्नुहोला)
श्रीमानका यस्ता सानातिना गल्तीहरूले पनि यसरी बिग्रन सक्छन् श्रीमतीहरू समयमै सचेत रहनुहोस् पुरा हेर्नुहोस
पछिल्लो समय श्रीमतिहरु बिग्रने क्रम हाम्रो समाज मा धेरै नै देखिने गरिन्छ ! विशेषगरी श्रीमतिहरु बिग्रनुको पहिलो कारण त श्रीमान बिदेशिनु र श्रीमति को बारेमा चासो नदिनु श्रीमति हरु बिग्रिएर विदेश मा रगत बगाएर श्रीमानले कमाएको सम्पति लिगेर अरु संगै मस्ती गरि अरु संग भागेको समाचार हरु हामि धेरै नै सुन्ने गरछौ !
आफ्नो बालबच्चा श्रीमति घरपरिवार लाइ राम्रो संग पाल्ने सुखी बनाउन विदेश गएको श्रीमान ले घर मा आउदा न त श्रीमति नै हुन्छ न त दुख गरि कमाएको सम्पति नै येस्ता घटना हरु धेरै नै हाम्रो समाज मा देख्न र सुन्न पाइन्छ आउनोस् कुरा गरौ कसरि सचेत बन्ने त येस्ता कुरा हरु मा कृपया पुरा पढ्नुहोला मनपरे सेयर गर्नुहोला !
यस्ता समाचार हरु प्रायः आफ्नै लापरबाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पीडितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ । आखिर के कारणले हो त ? बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बिग्रिनु ? उनीहरुका श्रीमतिहरु गलतबाटो रोज्न ? एउटा तितो एथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं ।
यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बिग्रिएका छन् । तर दिनहुँजसो आइरहेका समाचारहरु हेर्दा गलत बाटो अपनाउने श्रीमतिका श्रीमान कि त वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् या त उनीभन्दा टाढा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै आफ्नो श्रीमतिलाई सहीबाटोमा लगाउन बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसका लागि यी उपाय अपानाउँदा राम्रो हुन्छ ।
श्रीमिति लार्इ कत्ति पनि फ्री नछोड्नुहोस् । श्रीमतीका हरेक भनाइमा चनाखो रहनुहोस् । उनलाई व्यस्त राख्नुहोस् किनकी उनले नानाथरी कुरा दिमागमा आउने अवस्था नबनाउनुहोस् । उनि के गर्दै छिन् ,कहाँ जादै छिन् किन जादै छिन् , हरेक कुरो को जानकारी लिने गर्नुपर्छ । धेरै माया गर्छु भन्दैमा धेरै विश्वास गर्नु राम्रो हुँदैन ।
अर्को तपाईको फोनको श्रीमतिले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन् । त्यसप्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्र्दा कस्तो तरिकाले बोल्नु हुन्छ ? ठाडो पाराले या सामान्य तरिकाले ? या बोल्दा बोल्दै रिसाएर फोन काट्नु हुन्छ ? जब श्रमती हरु बोल्दा बोल्दै एकासी झर्किने ,रिसाउने गर्छन भने शंका गर्नैपर्छ । असल श्रमती हुन् भने तपाई जे जस्तो भन्नुस बिदेस को फोन ,आफ्नो श्रीमानको फोन आउदा खुसि नै हुनु पर्छ । यदी सामान्य कुरो मै फोन काट्ने , झर्किने गरिन भने सम्झनुस कुनै चक्कर चल्दै छ, जहाँ अब तपाई को फोन नआउदा पनि कुनै फरक नपर्ने अवस्था भैसकेको छ ।
घरमा पैसाको कारोबार कसले गर्छ ? श्रीमती या बाबा आमाले ? या जति भए पनि श्रीमतीको नाम मा पठाउनु हुन्छ र कुनै हिसाब र जानकारी लिनु भएको छैन ? यी प्रश्नमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ । श्रीमती हो अर्काको घरबाट मलाई नै भनेर आई, यसको अब म बाहेक अरु कोही छैन भनेर कहिल्य भावनामा नबग्नुहोस् । बरु तपाई एकपटक आफ्नो दुःखको कमाइलाई सोच्नुहोस् ।
मैले कमाएको पैसा यसै उडेको त छैन कतै ? त्यसैले श्रीमतिलाई अभावमा बाँच्न सिकाउनुहोस् । अभाव भन्दैमा सारो कष्ट भने दिनुहुँदै । धेरै माया गरेर सबै पैसा श्रीमतिलाई नै पठाउनुहुन्छ त्यसको हिसाब किताब केही राख्नुहुन्न माग्नुहुन्न भने सोच्नुहोस् तपाईको लगानी बालुवामा पानी अवश्य हुन्छ ।
अर्को चनाखो हुनुपर्ने प्रश्न हो श्रीमती कतिको चुलबुले छिन् ? कुनै जागिर गर्नु हुन्छ या जागिर गर्ने बहाना गर्दै छिन् ? श्रमती चुलबुले छिन् भने अलि ख्याल गर्नु होस् , किन कि महिला हरु जति चुलबुले हुन्छन । उतिनै यौन प्यासी पनि हुन्छन् , कुनै जागिर गर्नु भएको छ या छैन । कस्तो खाल्को जागिर हो , जानकारी लिनुहोस् , यहाँ यस्तो पनि देखिनमा आएको छ श्रीमती जागिरमा जाने भन्ने उल्टो आफ्नो पैसो खर्च हुने । यो अवस्था घरबार बिग्रिएको अवस्था हो ।
यो सबैमा महिलामा लागू नहुने भए पनि पछिल्लो केही यस्तो घटना घटेका छन् । जुन तपाई हामीले सामाचारमा सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । त्यसैले आफू सचेत भइयो भने वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन विश्वको कुनै पनि कुनामा गए पनि तपाईले आफ्नो घर परिवार सुमधुर बनाउन सक्नुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मात्र होइनन् संगै बस्दा बस्दै घरबार बिग्रिएका घटनाहरु पनि हामीले देखेका छौ तर तुलनात्मक रुपमा यस्ता घटना भने कमी नै हुन्छन। एजेन्सीको सहयोगमा द नेप न्युज ।
तपाईलाई यो पोस्ट कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट मा लेख्नुहोला ! यो पोस्ट राम्रो लागे सेयर अवस्य गर्नुहोला ।